Ihe omume 4 ga -eme n'oge mgbụsị akwụkwọ n'èzí | Bezzia
Ihe omume 4 ị ga -eme n'oge mgbụsị akwụkwọ n'èzí
Maria onyekwere | 01/09/2021 10:00 | Emelitere ka 29/08/2021 23:45 | Oge ntụrụndụ
Ọdịda na -ewetara ya obere okpomọkụ mana ọ ka na -atọ ụtọ ịnụ ụtọ ihe omume n'èzí. Ọ bụghị n'ihi na ọdịda bịara anyị ga -ahapụ ihe ndị a wee kpọchie onwe anyị n'ụlọ. E nwere ọtụtụ eme na mgbụsị akwụkwọ nke na -enye anyị ohere ịnụ ụtọ ihe dị iche iche nke oge a n'afọ.
Anyị nwere ike icheta ọtụtụ atụmatụ anyị nwere ike ime n'ime afọ niile mana nke ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ ha nwere agba pụrụ iche. Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ naanị, ndị hụrụ egwuregwu n'èzí ga -enwe ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ala n'oge a. Mana enwerekwa ihe omume ndị ọzọ dị jụụ karịa nke ị nwere ike ịnụ ụtọ nke ukwuu.
1 Ịgagharị n'ogige ntụrụndụ eke
2 Ụzọ igwe kwụ otu ebe na -aga n'okporo ụzọ griinụ
3 Maka mushrooms
Ịgagharị n'ogige ntụrụndụ eke
Mgbụsị akwụkwọ na -enye anyị ọdịdị mara mma na nke ahụ na -eme ka ọ bụrụ oge kacha mma iji leta otu n'ime ọtụtụ ogige ntụrụndụ eke dị na mba anyị. Ndị a na -enyekwa anyị ụzọ dị iche iche yabụ na ọ naghị esiri ike imegharị njem ahụ na njirimara otu.
Ị chọrọ ụfọdụ echiche? Enwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ mara mma nke ukwuu n'oge mgbụsị akwụkwọ: Fraga de Catasós na Pontevedra, Gorbeia na mba Basque, Urbasa na Navarra, Somiedo na Asturias, Picos de Europa na León, Montseny na Catalonia, Arribes del Duero na Zamora na Salamanca, Cazorla, Segura na ndị Villas dị na Jaén, Sierra Nevada na Granada….
Ọ bụrụ na gị na ụmụaka na -aga Ị nwere ike ime ka njem ahụ bụrụ ihe na -atọ ụtọ karịa site n'ime ihe dị mfe dị ka ịnakọta akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ, were ụda ụda akwụkwọ ha na -ekewa ha, nke n'oge mgbụsị akwụkwọ ga -esi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ruo odo na acha ọbara ọbara. N'ikpeazụ, ị nwere ike họrọ nke kacha mma ma kpoo ha na igwe eji eme ụlọ iji mee nka dị iche iche n'oge oyi.
Ụzọ igwe kwụ otu ebe na -aga n'okporo ụzọ griinụ
Site na mgbanwe nke akwụkwọ na -acha odo odo na ocher, enwere ụzọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -agbanwe n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ma gịnị kpatara na ị gaghị achọpụta ha site na igwe kwụ otu ebe? Ha na -ekwu na anyịnya igwe bụ maka oge okpomọkụ mana okpomọkụ n'oge mgbụsị akwụkwọ na -atọ ụtọ nke ukwuu inwe ihe ntụrụndụ a, ị kweghị?
Na Spain enwere 2.000 kilomita nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na ọtụtụ n'ime ha sitere n'okporo ụzọ ụgbọ oloko mebiri emebi. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha na -eso ụzọ nke ụzọ egwu ochie, ha dịkwa larịị, yabụ na ha bụ njem dị ụtọ maka ezinụlọ dum.
Sierra de la Demanda Greenway n'etiti La Rioja na Burgos, Plazaola Greenway na Navarra, Carrilet Greenway nke na -agafe na ndagwurugwu nke ugwu mgbawa La Larotrotxa, Oso Greenway na Asturias na Greenway nke Monfragüe na Cáceres, bụ naanị ụfọdụ atụmatụ. .
Na mbata nke mgbụsị akwụkwọ, oge ero na Spain na -amalite. N'oge nke afọ a, enwere ike ịnakọta ha boletus, Morels, chanterelles, chanterelles, opi ọnwụ ... Ụfọdụ na -eto na ntọala osisi, ebe ndị ọzọ na -eto n'elu osisi na -adị irekasị.
Ịchọ olu, ịnakọta na isi nri ha bụ nnukwu ụzọ iji nọrọ oge n'èzí. Otu ihe omume ị ga -eme n'oge mgbụsị akwụkwọ nke na -enye gị ohere ịnụ ụtọ naanị gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ okike. Otú ọ dị, tupu ịmalite ya, ọ bụ dị mkpa ịmata ụdị dị iche iche marakwa nke bụ nsí na nke nwere ike iri.
E nwere ọtụtụ ụdị fungi na ụfọdụ nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na eloda ya, yabụ ibido na onye maara nke ọma na okwu ahụ nwere ike inye aka nke ukwuu. Mụta ihe ndị dị mkpa wee kwụsịkwa ọzụzụ ịnakọta olu oge ma rie ha nke ọma.
Ị nwere ogige? Nwee obi ụtọ ịrụ ọrụ ndị a na -ahụkarị n'oge a n'afọ. Wepu osisi ọ bụla na -arịa ọrịa ma ọ bụ ihe ọkụkụ iji gbochie mgbasa nke pests na ọrịa. Mgbe nke a gasị, kwachaa conifers na ahịhịa ahịhịa ma tinye compost organic.
Oge a n'afọ dịkwa mma ịkụ ihe tulip, hyacinth ma ọ bụ daffodil bulbs. Maka bọlbụ ọdịda na kwa afọ ka ọ na -eto n'oge opupu ihe ubi, ị ga -akụ ya n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ị nwekwara ike kụọ ifuru oge dị ka chrysanthemums, pansies ma ọ bụ heather nke ga -achọ ubi ahụ mma.
Ee, n'aka nke ọzọ, ị chọrọ ịmalite ọrụ ugboN'oge a ị nwere ike kụọ celery, yabasị, broccoli, parsnip, karọt ma ọ bụ akwụkwọ nri, yana ahịhịa na -esi ísì ụtọ dị ka valerian, rosemary, thyme ma ọ bụ pasili.
Kedu n'ime ihe omume ndị a ị ga -eme n'oge mgbụsị akwụkwọ nke kacha adọta gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Oge ntụrụndụ » Ihe omume 4 ị ga -eme n'oge mgbụsị akwụkwọ n'èzí
Braid cascade: Chọpụta otu esi eme ya n'ụzọ dị mfe!
Ihe kpatara na ị naghị enwe mmekọahụ dịka di na nwunye